May 24, 2022 N88LeaveaComment on चुनाव जितेपछि रेनु दाहालले गरिन् यस्ताे बाचा !
काठमाडाैं । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा पुनःनिर्वाचित रेनु दाहालले जनताको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्ने बताउनुभएको छ । अन्तिम मतपरिणाम आएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले महानगरवासीलाई निराश हुन नदिने बताउनुभयो । स्थानीय तहमा यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको भन्दै उहाँले महानगरका अधुरा काम पूरा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“देशकै ध्यान यो महानगरमा रहेकाले आफू जित्नु सुखद भए […]
भरतपुर महानगरकाे मेयरमा रेनु दाहाल विजयी
May 24, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर महानगरकाे मेयरमा रेनु दाहाल विजयी
चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेनु दाहाल विजयी भएकी छन् । उनी ५२ हजार ३० मतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा विजयी भएकी हुन् । माओवादी केन्द्रकी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी दाहाल २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई हराउँदै मेयर चुनिएकी थिइन् । यसपटक पनि उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई […]
राजेशमान बने वीरगन्जको मेयर, एमालेका सरावगी पराजित
May 24, 2022 N88LeaveaComment on राजेशमान बने वीरगन्जको मेयर, एमालेका सरावगी पराजित
वीरगन्ज । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रमुख पदमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजेशमान सिंह ४६ हजार २१५ मतप्राप्त गरी विजयी बनेका हुन् । वि.सं. २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट वीरगन्ज–३ को वडा सदस्यमा निर्वाचित सिंह २५ वर्षपछि मेयर बनेका छन् । ०६० सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि अत्यधिक मत […]